मनोरञ्जन – Page 931 – Etajakhabar
यसपालीको वडादशैंमा युरोप दोहोरीमय हुँदै
ताजाखबर। नेपालीहरुको महान पर्व विजयदशमी २०७३ को अवसरमा युरोपमा दोहोरी घन्किने भएको छ I राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल युरोप शाखाले स्थापना गरेको परोपकारी संगीत कोषको विकासको लागि गर्न लागेको 'वडादशैं लोक दोहोरी धमाका-२०१६' यूरोपका फ्रान्स, बेल्जियम, फिनल्याण्ड, स्पेन, पोर्तुगल लगायतका देशका विभिन्न शहरहरुमा यहि अक्टोबर ९ बाट अक्टोबर १६ सम्म सम्पन्न हुने भएको हो I नेपाली कला स...
‘एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’को नया गीत रिलीज (भिडियो)
ताजाखबर। 'एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी'को नया गीत 'हर गली में धोनी है' रिलीज भएको छ । यो गीतमा न त महेंद्र सिंह धोनी देखिएका छन् न त फिल्मका हीरो सुशांत सिंह राजपूत । यो गीतले धोनीको स्परिटलाई देखाउँछ, जो भारतका हर गल्ली, घर, शहरका हर बच्चा तथा बृद्दमा छाएका छन् । गीतलाई रोचक कोहलीले संगीत दिएका छन् भने मनोज मुन्तशिरले लेखेका छन् । फिल्म भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनीको जिंदगीमा बनेको हो । फ...
ताजाखबर। नायक गजित बिष्ट, चलचित्र चपली हाइटकी अभिनेत्री मरिस्का पोखरेल बिस्वकै कान्छा निर्देशक सौगात बिष्टलगायतका कलाकारले फिटनेश र्‍याम्पमा क्याटवाक गरेका छन् । 'जुम्वाण्डु फिटनेश क्लब'ले राजधानीमा सोमबार सााझ आयोजना गरेको कार्यक्रम 'जुम्बा एण्ड डिजे डान्स पार्टी २०१६' उनिहरुले र्‍याम्प वाक गरेका हुन् । र्‍याम्प वाकका क्रममा उनिहरु बिभिन्न फिटनेश प्रशिक्षण समेत लिएका छन् । जुम्वाण्डु फिटने...
‘पद्मावती’ शुरु नहुँदै विरोध, हार्दिकले दिए निर्देशकलाई चेतावनी
ताजाखबर। संजय लीला भंसालीको फिल्म 'बाजीराव मस्तानी'मा ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरेको आरोप लागेको थियो जसका कारण विरोध समेत सहनुपरेको थियो । अहिले आएर उनै भंसालीले अर्को फिल्म शुरु नहुँदै विरोधको सामना गर्नुपरेको छ । ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित रहेर बन्न लागेको फिल्म 'पद्मावती'को शूटिंग शुरू समेत भएको छैन तर यसको विरोध शुरू भईसकेको छ । यस फिल्मको विरोध गुजरातमा हार्दिक पटेलको अगुआई वाला पाटी नवनिर...
घटस्थापनाका दिन पोखरामा लायन्स नाईट हुने
पोखरा, ५ असोज- लायन्स क्लब अफ पोखरा टुरिजम सिटीले लायन्स नाईट–२ गर्ने भएको छ । घटस्थापनाका दिन पोखराको फुलबारी रिसोर्टमा साँझ ६ बजेबाट शुरु हुने कार्यक्रममा सबिन राई, रामभक्त जोजिजु, इतु जोजिजु लगायतका नेपालका ख्याती प्राप्त कलाकारहरुको प्रस्तुती रहने लायन्स क्लब अफ पोखरा टुरिजम सिटीका अध्यक्ष लायन सुदिप पौडेलले कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिने उद्धेश्यले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । ...
पोखरा, ५ असोज- पोखरामा नयाँ हाँस्य सिरियल ‘ल खत्तम’को छायाँकन भैरहेको छ । हाँस्य टेलिश्रृंखला ‘मेरी बास्सै’बाट चर्चित बनेका राजु मास्टर उर्फ राजु पौडेलको निर्देशनमा यो सिरियल बनिरहेको छ । हाँस्य सिरियललाई चाँडै नै पोखराको एक टेलिभिजनबाट प्रशारण गर्ने र युट्युबमार्फत विश्वव्यापी रिलिज गर्ने निर्माण टोलीले जनाएको छ । राजु पौडेल र पोखराका कलाकार दिवाकर भण्डारी मिलेर यो सिरियल निर्माण गरिरहेका छन्...
छुट्टिए ब्राड पिट र एन्जेलिना जोली
काठमाडौं,हलिउडको सबैभन्दा चर्चित जोडी ब्राड पिट र एन्जेलिना जोली एक–अर्कासँग छुट्टिने भएका छन् । अभिनेत्री एन्जेलिना जोलीले सम्बन्धविच्छेदका लागि निवेदन दिइसकेकी छिन् । यी दुईले दुई वर्षअघि फ्रान्समा विवाह गरेका थिए । दुईका ६ बच्चा छन् । तीमध्ये तीन ‘एडप्ट’ गरिएका हुन् । केही समययता ब्राड पिटको नाम अन्य दुई अभिनेत्रीसँग जोडिँदै आएको छ । यही कारणले उनीहरू छुट्टिने निर्णय गरेको हलिउडमा चर्चा छ । तर...
छुट्टिए आलिया–सिद्धार्थ ?
काठमाडौं, असोज ६- बलिउडमा फिल्म ‘स्टुडेन्ट अफ द इयर’बाट साथसाथ सम्बन्धमा रहेका अभिनेत्री आलिया भट्ट र अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्राको जोडीलाई ‘सबैभन्दा प्यारो जोडी’ भनेर पनि चिनिन थाल्यो । तर, यी दुईका प्रशंसकका लागि नरमाइलो खबर छ । अब यी दुई एक–अर्कासँगको सम्बन्धमा पूर्णविराम लगाउँदै छन् । बलिउडमा आएका रिपोर्टहरूका अनुसार दुवैले सहमतिमा सम्बन्धविच्छेद गर्न लागेका हुन् । उनीहरू दुवैले अब करिअर वि...
किन छोडे सिद्धु पाजीले कपिल शर्माको शो ?
एजेन्सी । चर्चित कमेडी शो द कपिल शर्मा शोका एक पात्र सिद्धु पाजीले कपिल शर्माको शो छोडेका छन् । भारतका पूर्व क्रिकेटर तथा राजनीतिज्ञ समेत रहेका सिद्धु पाजीले आफ्नो नवगठित पार्टीको चुनावी तयारीका लागि सिद्धुले शो छोडेको बताएका छन् । ३० सेप्टेम्बरको कपिल शर्मा शो सिंहका लागि अन्तिम हुने र सिद्धुले आफ्नो पुरै ध्यान पञ्जावको राजनीतिमा लगाउने बताइएको छ । चाहेका छन् । यसअघि मात्रै एउटा विबादास्पद ...
कस्ता व्यक्तिले पढ्ने फिल्म ?
काठमाडौं, ६ असोज - फिल्ममा करिअर बनाउन चाहनेहरूलाई पनि नेपालमा अध्ययनको अवसर रहेको छ । नेपालमा अध्ययन गरेर राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिने विषय हो ‘फिल्म स्टडिज’ । फिल्मी क्षेत्रमा देश तथा विदेशमा राम्रो व्यक्तिलाई अवसरहरू भएकाले नेपालमा पनि अध्ययनमा आकर्षण बढ्दै गएको छ । नेपालमा फिल्म पढ्नेहरूलाई त्यति सम्मानित पेसाका रूपमा नहेरिएका कारण अभिभावकलाई ...
Previous 1 … 930 931 932 … 1,023 Next
-15268 second ago
-14416 second ago
-5862 second ago
-4824 second ago
-4337 second ago
-4284 second ago